New Famonoana Drug Vao 10 Minitra hahafatin-ketaheta anay mpamono olona - News Fitsipika
Fanamelohana ho faty (sary: Wikipedia)
ity Novambra 30, 2009 sary mampiseho ny famonoana efi-tranon'ny “fahafatesana trano” tao amin'ny Southern Ohio Correctional Facility in Lucasville, Ohio
A Etazonia Niady mpamono olona ka gasped ho rivotra, fara fahakeliny 10 minitra araka izay novonoina ho faty tamin'ny famonoana ho faty ela nampiasa zava-mahadomelina vaovao mampiady hevitra molotov, araka ny vavolombelona.
Ny mpanao gazety fa ny Columbus Dispatch gazety nanatrika ny famonoana ny 53 taona, Dennis McGuire dia nitatitra fa ny Ohio namono natao “snorting ary choking” feo araka izay resin'ny.
Nilaza ny manam-pahefana Ohio AFP fa McGuire, voaheloka ho faty ao amin'ny 1989 fa ny fanolanana sy ny famonoana ny tanora vehivavy bevohoka, nambara maty amin'ny 10:53 aho (1553 GMT).
Ny mpanao gazety, izay nanatri-maso ny famonoana hoy ny fanafody ampiasaina amin'ny mahafaty tsindrona efa nanomboka izay eo ambany fitantanan'ny 24 minitra talohan'io amin'ny fonjan'i Lucasville.
Teo ambany vaovao Protocol Ohio, McGuire Novonoina mampiasa molotov ahitana ny sedative midazolam sy analgesic hydromorphone, ny miaraka na oviana na oviana teo aloha ampiasaina ao amin'ny United States.
Ny famonoana vaovao Protocol nampahafantarina taorian'ny Etazonia Ohio sy ny hafa dia milaza fa mitana ny fanamelohana ho faty dia nanomboka nihazakazaka avy tany Eoropa barbiturates, rehefa manome azy ireo intsony mpanamboatra.
McGuire ny mpisolovava efa nanohitra ny fomba famonoana, nanao ny mpamono olona dia ho faty ny asphyxia ao amin'ny toe-javatra fantatra amin'ny hoe “rivotra ny hanoanana,” fampijalian ny karazana lozabe sy tsy mahazatra fanasaziana ambanin'ny US voararan'ny Lalàm-panorenana.
fa ny antso, Izay nandeha tamin'ny lalana rehetra ho any amin'ny US Fitsarana Tampony, no nolavina.
Ny mpitsara federaly tany Ohio, Gregory Frost, nanao hoe: “ny porofo eo anoloan'ny fitsarana tsy mba hanolotra ny Mitana mety fa McGuire hiaina fanaintainana mafy.”
Ny mpanao gazety, izay nanatri-maso ny famonoana ho faty Alakamisy hoy McGuire niseho ho manempotra araka izay efa novonoina ho faty.
Araka ny farihy ny mpanao gazety, dia ny lava indrindra hatramin'ny famonoana ho faty indray Ohio nampiditra ny fanamelohana ho faty ao amin'ny 1999.
“tokony 10:33 aho, McGuire Nanomboka miady sy gasping mafy ny rivotra, fanaovana snorting sy choking feo izay naharitra, fara fahakeliny 10 minitra, ny tratrany sy ny totohondry miantoraka clenched,” ny Columbus Dispatch nitatitra.
“Deep, rattling feo emanated avy amin'ny vavany. Fa ny farany, fotoana maro talohan'ny nanonona maty, Izy mbola.”
Fanamelohana ho faty manam-pahaizana mamoaka ny feony manahy amin'ny antsipirihany ny McGuire ny fahafatesan'i, nanao hoe: fa nanondro ny fomba famonoana izay “egregious sy ny olana.”
“Amin'ny fanazavana ny lavany sy ny famaritana ny Dennis nanelingelina ny famonoana McGuire, ho fanampin 'ny isan-karazany ny mahafaty tsindrona fahasarotana tatitra amin'ny fanjakana hafa, dia hita fa ny mahafaty ity firenena ity tsindrona fomba kokoa egregious sy ny olana noho ny hatramin'izay no,” Deborah Denno, avy ao amin'ny University Fordham School ny Lalàna, nilaza AFP in mailaka.
Maya foa, talen'ny ekipan'ny ny fanamelohana ho faty tao amin'ny Reprieve tsy mitady tombontsoa vondrona, voampanga Ohio manam-pahefana ny tsy firaharahiana manam-pahaizana toro-hevitra.
“Ohio dia nampitandrina ny manam-pahaizana fa ny fanandramana fitarihana ny olona toy izany vivery mahatonga azy ireo ny fijaliana lehibe, ary ny porofo maneho fa efa nitondra izany avy,” Foa hoy ny fanambarana.
“Firy famonoana botched kokoa isika no mila mahita eo anatrehan'ny mpiambina intsony ny fampiasana ny olombelona toy ny Ginea kisoa?”
Alakamisy ny famonoana dia nanatontosa ny faharoa amin'ity taona ity amin'ny alalan'ny manam-pahefana Amerikana mampiasa vokatra vaovao, izay niseho hiteraka fijaliana ny voaheloka.
Janoary 9 in Oklahoma, mpamono olona voaheloka Michael Lee Wilson hoy izy no tokony hahatsiaro ny “ny tenany rehetra afo” araka izay efa novonoina ho faty.
Wilson Novonoina mampiasa fifangaroan ny zava-mahadomelina ao anatin'izany pentobarbital, ny fananana fampiasa mba euthanize biby.
Na izany aza, ireo karazana zava-mahadomelina ankehitriny ihany no vokatry ny fivarotam-panafody izay fehezin'ny lalàna eo an-toerana, fa tsy federaly dalàna.
Ny fanafintohinana Nipoaka tamin'ny Novambra 2012 in Massachusetts, rehefa mahantra ny fahadiovana ao amin'ny anankiray amin'ireo fivarotam-panafody dia tsiny ho toy ny antony mahatonga ny mahafaty meningite valan'aretina.
McGuire no fahatelo mba ho faty ny olona ao amin'ny United States tamin'ity taona ity. Ohio novonoina ho faty ny telo tamin'ireo 39 ny olona novonoina ho faty tany Etazonia tamin'ny taon-dasa, araka ny Fanamelohana ho faty Information Center.
Ity lahatsoratra ity, New famonoana levitra maka 10 minitra hamono US mpamono olona, ny mpilaza vaovao avy amin'ny AFP ary nandefa eto nahazoana alalana. Copyright 2014 AFP. Zo rehetra voatokana
63660	8 Etazonia
← 10 Tsotra Soso-kevitra Mba hampitombo ny fitanana Sigara mampidi-doza kokoa noho ny hatramin'izay, US Report Mampitandrina →